Amandla | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ubisi lwe-Tibet ubisi (kefir fungus): ukwakheka kwamakhemikhali, ukusetshenziswa kanye nezakhiwo zokwelapha
I-Kefir mushroom ngokungafani nezezakhamuzi ezijwayelekile zehlathi. Kuyinto i-white elastic substance (izimpande ebusweni lobisi oluvuthiwe) obubukeka njenge-cauliflower. Ingabe i-kefir mushroom iyasiza, futhi ingasetshenziswa kanjani? Isizinda semlando Ngisho nasezikhathini zasendulo, amakhokithi aseTibet waqaphela ukuthi ubisi oluvotshwe ngamabhodlela obumba luvuleka ngezindlela ezahlukene.
Indlela yokulondoloza ama-peas aluhlaza ekhaya: zokupheka nezithombe ebusika
Isikhathi sokugaya ngenye yezinkinga kakhulu empilweni yabesifazane besifazane: kuningi okumelwe ukwenze ukuze kuphephe ukusho ukuthi umndeni wakho unikezwa ngokukhululeka kwamaqoqo ebusika, futhi amashalofu asezinqolobaneni agcwele umthamo nazo zonke izinhlobo zezinto ezihamba phambili. Kulesi sihloko sizobheka izindlela zokupheka ezimbili eziphekiwe zokupheka okwebhakabhaka ekheniwe, okuzokujabulela ngokukhululeka nokusheshisa kokukhipha, futhi imiphumela ngeke ishiye noma ubani ongenandaba.
Indlela yokuchitha ubusika futhi uhlangabezane nentshonalanga, noma ama-7 best zokupheka for pancakes for Shrove ngoLwesibili
Ezweni lanamuhla, uMaslenitsa akagubha njengasezinkathini zikagogo, kodwa ngesikhathi esifanayo umbuzo wokupheka ama-pancake amnandi awukahle ulahlekelwe ukuhambisana kwawo. Yingakho sichaza ngokuningiliziwe izindlela zokupheka ezithandwayo ezingaba usizo kulo lonke isonto lemikhosi, kodwa okokuqala masibuyele emlandweni.
Indlela yokupheka i-marinade ngamaphiko ku-grill, izindlela zokupheka eziyisithupha
I-Crispy, inyama enomsoco, elula futhi ehlwabusayo egosiwe ngamalahle ... Isithombe esinjalo sikwenza ukuthi uvame ukugwinya umuthi, futhi uma ufaka incazelo engaphambilini iphunga elimnandi elimnandi elidala amakhambi emanzini, bese ufuna nje ukushiya indawo futhi usheshe uye esitolo ukuze uthole inyama entsha , ukuhlanza futhi ngokushesha ukuphonsa phezu ember.
Amanzi wegalikhi wama-orchid: izibonelo zokulungiselela nokunisela
ICampanula: nakekela izinsimbi ezinomusa ekhaya
Okusajingijolo "Ifa": izici, izinzuzo nezingozi
I-Scarlet Mustang Tomato: izithombe nokuvunwa
Ukulima, ukunakekelwa nokukhiqizwa kwe-clematis ezweni
Izinhlobo zamagilebhisi zeViking - incazelo yezinhlobonhlobo, ikakhulukazi zokutshala nokukhula
Isifo esithathelwanayo esithathelwanayo yisifo se-avian streptococcosis: sibonakala kanjani nokuthi siyaphathwa kanjani?
I-Percheron: ihhashi elide kunazo zonke elinomzimba omuhle kakhulu